प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा विदेशबाट फर्केका नेपाली किन अटाएनन् ? - Nepalese Times
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा विदेशबाट फर्केका नेपाली किन अटाएनन् ?
नेप्लिज संवाददाता १५ आश्विन २०७७, बिहीबार ०८:०६ (10 महिना अघि) २४१ जनाले पढ़िसके
काठमाण्डौ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले भारत लगायत तेस्रो देशबाट नेपाल फर्केका नेपालीलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत तत्काल रोजगारी दिन नसक्ने श्रम मन्त्रीले बताएका छन्। बीबीसीसँग कुरा गर्दै नले त्यस्ता नेपालीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने गरी कार्ययोजना अघि बढेको भए पनि तत्कालै व्यवस्थापन गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा आफूहरु नरहेको बताए । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न भनेर यो वर्ष झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पालिकाहरुमा पठाएको छ । ती आयोजनाले नेपालमै रहेका युवालाई समेटेको भन्दै उनले प्रक्रियागत रूपमा विदेशबाट फर्किएकालाई अहिलेको समयमा समेट्न नसकेको बताए । सङ्घीय या प्रादेशिक सरकारले रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेकैले दशौँ हजार नेपालीहरु अहिले फेरि भारत र तेस्रो देशतर्फ गैरहेका छन् ।
भारतबाट फर्किनेहरू तोकिएका नाकाबाट औपचारिक रूपमा बाहेक पनि ठूलो सङ्ख्यामा प्रवेश गरेकाले ठ्याक्कै सङ्ख्या यकिन छैन। तर अहिले भारत फर्किनेको सङ्ख्या नै डेढ लाख जति पुगिसकेको श्रम मन्त्रीले बताएका छन् । चैत यता ठ्याक्कै कति नेपाली भित्रिए भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग नरहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। तर अनुमानित करिब तीन लाख भारतबाट फर्किएको र तेस्रो मुलुकबाट करिब ७५ हजार नेपाली फर्किसकेको उनले बताए। गैरसरकारी संस्थाहरूले भने भारतबाट फर्किनेको सङ्ख्या नौ लाख भन्दा बढी रहेको दाबी गर्ने गरेका छन् ।
अहिले लाखौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशबाट स्वदेश फर्किएका बेला उनीहरूलाई नेपालमै व्यवस्थापन गर्ने मौका सरकारले चुकाएको आप्रवासी कामदारबारे जानकारहरू बताउँछन्। अर्काको देशमा गएर वर्षौँ काम गरेर सीप हासिल गरेका त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहेको भए यहीँ राख्न सक्ने अवस्था रहेको पूर्व अर्थ सचिव तथा आप्रवासी कामदारका मामिला नजिकबाट हेरिरहेका रामेश्वर खनाल बताउछन् । नेपालमा करिब ७ लाख भारतीय कामदार रहेको एउटा अनुमानित तथ्याङ्क छ । महामारीपछि तिनीहरू पनि लगभग सबैजसो भारत फर्किएका थिए। तिनीहरूले गर्ने रोजागारीमा नेपालीलाई नै राख्न सकेको भए चाडबाडको मुखमा कमाइ गर्न भन्दै नेपालीहरू भारत फर्किनुपर्ने थिएन खनालले भने। बीबीसी नेपाली सेवाबाट ।